4 tabo oo aad si dhakhso ah oo fudud u birta | Bezzia
Tony Torres | 07/05/2022 16:00 | Guriga
Helitaanka habka ugu dhaqsaha badan uguna fudud ee birta loo mariyo waa mid ka mid ah maxsuulka ugu sarreeya dhammaan kuwa doonaya in ay waqti badbaadiyaan iyaga oo aan ka tanaasulin xirashada dharka had iyo jeer si fiican u dhalaalaya. Kaadigu waa mid ka mid ah hawlaha loogu neceb yahay, kuwooda ugu badan ee la iska ilaaliyo iyo kuwa inta badan laga shaqeeyo si loo yareeyo isticmaalkooda. In kasta oo ay jiraan dhar iyo qalab badan oo si fiican u muuqda iyada oo aan la feerayn, haddana runtu waxay tahay in ay jiraan dhar aan socon karin iyada oo aan la feereynin.
Hadda, saacadahaas dheer ee feereeynta ee qalabka la dhex mariyay mid kasta oo ka mid ah dharka ama alaabta guriga ayaa laga tagay. Looma baahna, nasiib wanaag mar kasta oo dharka guriga la soo saaro iyo dharka ku jira fiilooyinka aan u baahnayn kafeega. Waxaad u baahan tahay dhawr farsamooyin oo kaliya inta lagu jiro dhar-dhaqashada waxaadna heli doontaa dharka oo diyaarsan oo ku qumman waqti aad u yar.
1 Khiyaamooyinka si degdeg ah loo biro
1.1 Ha iloobin jilciyaha marada
1.2 Iska ilaali in aad culeyska saarto mashiinka dharka
1.3 dharka oo la dhaqo ka dib
1.4 Laab dharka inta aad sugayso xilliga kaawaynta
Khiyaamooyinka si degdeg ah loo biro
Furaha ugu muhiimsan waa habka loo dhaqo dharka, sababtoo ah dhowr farsamooyin fudud waxaad heli doontaa dharka si ficil ahaan diyaar u ah. Waxa kaliya oo aad ku qasbanaan doontaa inaad kaw ka bixiso shayada aadka ugu baahan, sida shaararka iyo shaadhadhka, goonnada iyo dharka. Fiiro gaar ah u yeelo tabaha soo socda ee kaaweynta sababtoo ah waxaa haboon in waqti yar lagu bixiyo dhar dhaqidda oo aan saacado ku qaadan kaawaynta.
Ha iloobin jilciyaha marada
Si aad u samayso dhar dhaqid wanaagsan waa inaad isticmaashaa saabuun ku haboon, haysta a mashiinka dharka nadiifka ah oo isticmaal dhar jilciye si uu dharku ula soo baxo ur udgoon oo waara. Laakin talaabadan ugu danbeysa sidoo kale waa lama huraan si loo helo maro jilicsan. Jilciyaha marada ayaa ka ilaalisa dharka inay si xad dhaaf ah u laalaabaan waxayna fududaynaysaa feeraynta. Ku dar cabbir biyo raacida ugu dambeysa ee wareegga mashiinka dharka waxaadna ogaan doontaa faraqa u dhexeeya.
Iska ilaali in aad culeyska saarto mashiinka dharka
Isticmaalka qalabka si fiican ayaa aad muhiim u ah si loo badbaadiyo kheyraadka. Laakiin haddii aad leedahay dhar laalaab badan, waxaa fiican inaadan ku dhaqin culeys buuxa. Kala saarista dharka ayaa kaa caawin doonta inaad ilaaliso tayada iyo muuqaalka dharkaaga. Waxayna sidoo kale kaa hor istaagi doontaa inaad birta u samayso wax ka badan intii loo baahnaa.
dharka oo la dhaqo ka dib
Habka aad dharka u qalajiso ayaa sidoo kale wax ka bedeli doonta. Waxa ugu horreeya waa in aad si fiican u kala bixiso dharka ka hor inta aan la laadin. Ku rux oo ku simi gacmahaaga, ka taxdar marka aad gelinayso maroojiyeyaasha si aanay calaamad u lahayn. Dharka ugu badan ee laalaabka, sida shaadhka, waxaad si toos ah ugu soo laadlaadi kartaa gacaliyaha. Qoyaanka wuxuu sababi doonaa in fiilooyinka ay ku fidiyaan culeyska hoostiisa waxayna kugu kici doontaa wax aad u yar inaad dharka ka dhigto.
Laab dharka inta aad sugayso xilliga kaawaynta
Fikradda ugu fiican waxay noqon doontaa in la kariyo isla marka aad dharka ka soo qaadato dharka, laakiin yaa waqti u haysta inuu sameeyo? Hubaal qofna ma jiro. Guud ahaan, dharka nadiifka ah ayaa looga tagay meel gees ah, iyada oo la sugayo meel bannaan oo awood u leh inay isku laabma, birta iyo si habboon u kaydiso wax kasta oo meesheeda ah. Tani waxay ku dhowdahay rajo la'aan, laakiin Haddaad dharka laalaabto oo aad dambiisha marada ku dhex darto, way yaraanayaan oo ay fududaan doonto in la biro marka wakhtigu yimaado.
Dharka guriga, kaliya waa inaad hubisaa inaad si fiican u kala bixisay tuwaalada iyo go'yaasha ka hor inta aanad dhigin. Miisaanka fiilooyinka qoyan ayaa ka dhigi doona gabal si ficil ahaan siman. Ka hor inta aan la iska dhigin armaajo, si fiican u simi maro kasta, ku fidi meel nadiif ahgeesaha u dhig oo si fiican u laabi. Sidan waxay ku ahaan doonaan si siman iyada oo aan loo baahnayn in la biro.
Oo si aad u soo afjarto liiskan tabaha si aad u fudud oo dhaqso badan u birto, xusuusnow inaad mar walba samayn karto baaritaan wanaagsan ka hor intaadan iibsan dharkaaga. Dooro maro yar oo laalaabtay, way fududahay in la dhaqo oo u baahan daryeel yar. Ugu yaraan dharka maalinlaha ah. U keydi dharka jilicsan munaasabadaha gaarka ah oo sidaas darteed waxaad ku badbaadin kartaa waqti badan dharka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » 4 tabaha si aad dhakhso iyo fudud ugu birto
Jimicsiga ugu fiican ee lagu dhimi karo miisaankaaga iyo bowdadaada